Rafitra AM 58khz - Mpamatsy Rafitra AM 58khz, Mpanamboatra - Misongadina
Home » Solutions » Vokatra EAS » Rafitra EAS
Rafitra 58khz AM
lafiny: 150 * 30 * 15cm
Zintin'aratra: 220 / 110V
Haben'ny baoritra: 155 * 35 * 20cm
fonosana: 1pcs / ctn, 12KG, 0.1CBM
Ny rafitra EAS dia miasa amin'ny fitsipika tsotra na inona na inona mpanamboatra na karazana haitao manokana ampiasaina: mpandefa mandefa signal amin'ny refy voafaritra amin'ny mpandray. Miteraka faritra fanaraha-maso izany, mazàna amin'ny làlan'ny fizahana na fivoahana raha misy ny fivarotana antsinjarany. Rehefa miditra ao amin'ilay faritra ianao, ny marika na marika misy toetra manokana dia miteraka fikorontanana, izay hitan'ny mpandray. Ny fomba marina hanakantsakanana ny marika na ny marika dia ampahany miavaka amin'ny rafitra EAS samihafa. Ohatra, ny tag na ny label dia mety manova ny fambara amin'ny alàlan'ny fitambaran-tsoritra semi-conductor tsotra (ny vatan'ny fananganana boribory mitambatra), ny fantsom-pifandraisana misy ny inductor sy ny capacitor, ny tady na tariby matevina na ny resonatorer.
Amin'ny alàlan'ny famolavolana ireo mari-pamantarana voakorontana noforonin'ny tag ary hitan'ny mpandray dia miavaka ary tsy azo noforonina tamin'ny toe-javatra voajanahary. Ny tag no singa fototra, satria tsy maintsy mamorona famantarana tsy manam-paharoa izy io hialana amin'ny fanairana diso. Ny fikorontanana eo amin'ny tontolon'ny elektronika ateraky ny marika na marika dia miteraka toe-javatra fanairana izay mazàna manondro olona manondrika fivarotana na manala entana arovana ao amin'ilay faritra.
Ny toetoetran'ny teknolojia dia mamaritra ny haben'ny fivoahana / fidirana fidirana. Misy ny rafitra izay manarona hatrany amin'ny lalantsara ety ka hatrany amin'ny fivarotana fivarotana lehibe. Toy izany koa, ny karazana haitao dia misy fiatraikany amin'ny fahamoran'ny fiarovana (fanakanana na fanakanana ny signal), ny fahitana sy ny haben'ny tag, ny tahan'ny fanairana diso, ny isan-jaton'ny tahan'ny fikarohana (tahan'ny fakana) ary ny vidiny.
Ny fizika misy ny marika EAS manokana ary ny teknolojia EAS vokariny dia mamaritra izay fatra matetika ampiasaina hananganana ny faritra fanaraha-maso. Ny rafitry ny EAS dia manomboka amin'ny ambany indrindra amin'ny alalàn'ny radio matetika. Toy izany koa, ireo zana-kazo samihafa ireo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fametrahana ireo endri-javatra misy fiatraikany amin'ny asa.